Kooxda Real Madrid oo shaacisay lambarada ay xiran doonaan saxiixyadeeda cusub… (Lambarkee loo gacan geliyey Eden Hazard?) – Gool FM
Kooxda Real Madrid oo shaacisay lambarada ay xiran doonaan saxiixyadeeda cusub… (Lambarkee loo gacan geliyey Eden Hazard?)
Haaruun August 9, 2019
(Madrid) 09 Agoosto 2019. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa shaacisay lambarada ay xiran doonaan saxiixyadeeda cusub ee ay xagagaan la soo wareegtay xilli Eden Hazard la siiyey lambar taariikh ku leh kooxda.
Xiddiga xulka qaranka Belgium ee Eden Hazard ayaa qaadan doona maaliyadda lambarka 7-aad ee kooxda Real Madrid kaasoo uu ka tagay Cristiano Ronaldo oo ku biiray Juventus.
Real Madrid haatan waxa ay u diiwaan geliyey Hazard inuu yahay xiddigooda cusub ee lambarka 7-aad, waxaana lambarkaan oo ah mid taariikh ku leh kooxda Los Blancos lagu xusuustaa inay u xiran jireen kooxda Raul Gonzalez iyo Cristiano Ronaldo.
Mariano Diaz ayaa ahaa ciyaaryahankii ugu dambeeyey ee lambarkaan taariikhiga ah xirta, inkastoo uu dhaliyahan doonaynin in iska dhiibo lambarkan haddana ugu dambeyn waa laga qaaday waxaana farta laga saaray Hazard.
Weeraryahankan Mariano Diaz ayaa la siiyey isaguna maaliyadda lambarka 24-aad, inkastoo la la xiriirinayo inuu ku biiri doono xagaagan naadiga AS Monaco ee Faransiiska ka dhisan.
Eden Hazard oo muddooyinkii dhowaa kooxda Real Madrid u xirnaa lambarka 50-aad ayaa maanta wixii ka dambeeya u qaadan doona si rasmi ah lambarka 7-aad, waxaana uu iska iloobi doonaa lambarkii 10-aad ee uu qaadan jiray kooxdiisii hore ee Chelsea.
Laacibkan reer Belgium ee Hazard sidii ugu fiicnayd kuma bilaaban waayihiisa kooxda Real Madrid, inkastoo uu dhawaan dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey ee kooxda kulankii saaxiibtinnimo ee ay ka adkaadeen kooxda reer Austria ee RB Salzburg.
Luka Jovic oo isna ku cusub kooxda Los Blancos ayaa loo gacan geliyey maaliyadda lambarka 18-aad, Rydrgo ayaa isna la siiyey maaliyadda lambarka 27-aad, halka Ferland Mendy oo ah saxiix kale oo ku cusub kooxda uu xiran doono lambarka 23-aad, halka Militao uu dhaxlayo maaliyadda lambarka 3-aad ee uu ka tagay Pepe.
Dhinaca kale James Rodriguez oo ka soo laabtay amaahdii uu ku joogay naadiga Bayern Munich ayaa la siiyay maaliyadda lambarka 16-aad, waxaana markii hore uu kooxda Real Madrid u xiran jiray maaliyadda lambarka 10-aad, balse hadda waxaa xiran Luka Modric.
Tababare Solskjær oo markii ugu horeysay ka hadlay heshiiska uu Lukaku ugu biiray Inter Milan
Liverpool oo guul weyn kaga daah furatay horyaalka Premier League, kaddib markii ay si xun u xasuuqday Norwich City… +SAWIRRO